Maaloo Abbaan Torbee Eessa Jira? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMaaloo Abbaan Torbee Eessa Jira?
Maaloo Abbaan Torbee Eessa Jira?
Damee Boruu: Ebla 20, 2018
TPLF spy agents camouflage innocent church goers, but their actual job includes elements of informant to keep authorities briefed on potential ‘rabble-rousers’ or cracking down opponents
Ilma Waaqayyoo Jesuus Kiristoos kan dabarsee warra Romaa itti qarishii sodamaan gurguratee bartoota isaa keessa tokko kan ture Yihuudaa dha. Warri Romaa Jesuus isa kam akka tahe baratoota isaa irraa adda baasanii hin beekan. Yihuudaan garuu warra Roomaa wajjin walii galee namni inni yaroo tokkotti maadii keessa harka kaa’uu Jesuus akka tahe malatoo kenneef. Akkuma jedhe qabsiisee akka fanisamu godhe. Amanamaa barataa isaa tahuu isaa caalaa immoo maadii tokko irraa nyaachaa jiru.
Kan diinaaf dabarsee nu ficcisisaa jiru namoota xixxiqqoo akka Yihuudaa nu fakkaatanii nuyi wajjin nyaachaa dabrsanii diinaaf nu laataa turanii fi jiran akka tahe beekamaa. Yaroo hundaa siyaasaaf jecha diinni keenya duraa TPLF jennee waakkachaa haa oollu malee TPLF eenyummaa keenya adda baaftee hin beektu. Kan qarroo Oromoo quba itti qabee dhabamsiisaa jiru OPDO dha. Wayyaanneen qarroo qeerroo fi qarree Oromoo tokko utuu OPDOn hin saaxiliin ajjeesuu, hidhuu fi tumuu hin dandeessu.
Warra ayyaanilaalatoota kana obboleessaa fi obboleetti keenya jennee rakkina keenya galgalaa fi ganama itti himana. Waan qabnu mara illee wajjin hirmaannee nyaanna. Isaan garuu yoo nuyi irraa achi galalan qarshii sodomaan nuu gurguratanii darbu. Uummatni Oromoo utuu ajjeefamuu, hidhamuu fi tumamuu OPDO dugdatti baatee jilbaan deema waggaa digdamii torba jiraate. Bara darban kana OPDOn immoo TPLF gatiitii baattee dugda Uummata Oromoo isa nama hin quuqne irraa diriirfatee teesse taa’aa turte.
Uummatni Oromoo na gahe, na irraa bu’aa jedhee fincilaan bara kana maqaa jijjiraman OPDOn TPLF dugdatti marxifatee bololi’aa jirti. Akka OPDOn yaadutti Uummatni Oromoo TPLF OPDON dugdati marxifatee deemaa jirtu kana arguuf dandeetti ykn dammaqinsa gahaa hin qabu. Akka hubannaa koo yoo tahe dammaqinsi Uummata Oromoo kan OPDO ol akka tahe mamii hin qabu.
Namni waan maqaa jijjiramaan mootummaan EPRDF itti jiruuf gowwoomu nama uummaan sammuun boodatti hafaa( retarded) fi warra mootummaa kana irraa dantaa argatu ayyaan ilaalatota qofa. Namni kamuu waan mootummaan odeessu dhugaa tahuun ni mala jedhee yaada lamaffaa qabachuun ni mala. Garuu waan odeefamu yoo kan wal mormu tahe ykn kan hojiin hin mul’ane yoo tahe dafee abdii irraa kutata.
Guyyaa har’aa kan argaa fi dhagaa jirru Mumichi Mnisteerota Dr. Abiyi haasan nama gowwomsuuf yaalus haasaan isaa kan wal mormuufi kan hojii itti jiran wajjin wal hin fakkaanne akka tahe qalbiin hubachuu dandeenya. Jijjirama goone jedhanii namoota wal qaxxamuursuun warra waggaa digdamii torbaa biyya kan qorqaa turee fi warra aangoon harkatti tortorreef biyyaa dabarsanii kenuun tuffii uumataati. Utuu sirni EPRDF hin jijjiramiin miseensonni EPRDF maqaa hojii wal jijjiruun waan haaraa ni fida jedhee namni eegatu nama du’e duwwaa dha.
Uummata Oromoof TPLF of irraa buusuuf duraa OPDO of irraa darbuun dirqama. Yoo uummatni Oromoo OPDO of irraa hin kaasu tahe OPDOn Uummata Oromoo jilbeefatee deemu akka itillee lafa irra diriiristee “ iskistaa”irratti buusuuf deemti. OPDOn karaa fuula duraa haasa damaan makaan uummata keenya gowwomsaa karaa duubaa waraana Wayyaaneen ficcisiisaa jirti. Har’a OPDOn shoofeera taate kan konkolataa oofaa jirtu of fakkeessaa jirti. TPLF garuu barcuma guutte diriirfatttee teessee karaa OPDOn irraa deemittu itti agrsiisaa jirti.
Labsii Yaroo Muddamaa kan labsate OPDO dha. Labsiin Yaroo Muddamaas hojii irraa oole kan jirus Oromiyyaa keessatti qofa. Erga Dr. Abiyi Mumicha Ministeeraa tahee muudamee as hidhamuu, ajjeefamuu fi daramuun ilmaan Oromoo isa durii daran itti caalee jira. Shirri Uummata Oromoo fi saba sabi-lammii naannoo Oromiyaa jidduutti godhamu bakka hundatti finiinaa jira. Uummatni Oromoo waan deemaa jiru kun hegree Uummata Oromoof haalan yaadessaa tahuu hubatee yaroon dura dhaabbachuu qaba. Nama Oromoo Mumicha ee Ministeerummaa mudanii isaanitu wal fixaa jira jechuuf malee har’as kan uummata keenya fixxaa jiru waraana Wayyaannee akka tahe waan wal nama gaafachiisu hin qabu. Amma waraanni Wayyaannee biyya Oromoo irra qubatee ixaan qabnu dhumuu dha.
Utuu aanan hin dhugiin kan garaa koo qabaneessu tokko oduu “Abbaa Torbee” dhaga’uu dha. Maaloo Abbaan Torbee eessa jiraa? Maaliif Abbaan Torbee, torba, torbaatama, dhiba torba hin taane? Yaa Abbaa Torbee Waaqayyoo sanyii kee nuuf haa baayisu. Lalisii dagaagii . Oromiyyaa cufa guuti. Kaayyoon kee fi hojiin kee haa margu, haa gabatu. Haadha keef tokkicha tahu duwwatu bade. Imimaan haadha deesse kan qoorsu si malee hin jiru.
Yoo maddii karaa bitaa nu rukkutan, nagaa buusuuf isa mirgaas itti qabi warri jedhan gowwummaa nu barsiisaa yaalu. Yaroo karaa bitaa rukkutamnuu utuu karaa mirgaa si’a lama itti qadaadnee jiraanne kan lamaffaa nu kabaluu yaadu hin jiru. Sana booda ulfinaa fi nagaan wal kabajnee waliin jirachuu dandeenya. Nama haqaa isaaf hin dhaabbannee kabajaa argachuu hin danda’u. Sabnis akkuma kana yoo haqaa isaa fi mirga isaaf hin dhaabbannee saba bara baraan gadadumaa keessa jiraatu taha.
Maaloo yaa Abbaa Torbee bofa amma fedhee yoo tumaa oollee mataan rukkutamu malee hin du’u. Hadhaan bofaa arba irraa jira. OPDOn akka Uummata Oromoo waggaa digdamii torbaaf dhiiga dhugdu kan godhe warra mataa ishee irra jiru. Abbaa Dulaa, Dr. Abiyi, obbo Lammaa irra jalqabee gadi dhufa. Shira TPLF wajjin xaxee warra uummata keenya kiyyoo garbummaa jalatti hanbisuu deemu of irraa kaasuun dirqama. Hojiin kee haalan bareedaa dha. Garuu summiin hiriyyaa hin qabne uummatni keenya dararu mataa OPDO irra dha jira. Summii kana uummata irraa kaasuuf yoo ilma ykn Obboleessa goota akka kee qabaate ykn hoorate achii gadi jalqabee yaroo gababaa keessatti walitti fulaasuu dandeessu. Eebbi Waaqayyoo fi imimaan haadha deessee dhabdee si wajjin haa tahu. Anis kabajaa fi ulfina onnee irraa buqqaa’e akkan siif qabu siif dhaamuu fedha.
Ilmi Oromoo Biyya Baqaa Keessa Jiru 'Covna-19' qabame jedhaa jira-Uumaa kadhdhaafi!!
Ilmi Oromoo Biyya Baqaa Keessa Jiru 'Covna-19' qabame jedhaa jira-Uumaa kadhdhaafi!! Italy #COVID-19 Corona virus…